Kooxdee ayaa haatan hogaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa Tiemoue Bakayoko, ma Chelsea mise Man Utd? | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Kooxdee ayaa haatan hogaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa Tiemoue Bakayoko, ma Chelsea mise Man Utd?
Kooxdee ayaa haatan hogaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa Tiemoue Bakayoko, ma Chelsea mise Man Utd?
Bulsha:- Chelsea ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga qadka dhexe Tiemoue Bakayoko inkastoo ay soo kordhayaan tirada kooxaha doonaya xiddiga xoogan ee kooxda AS Monaco.
22 sanno jirkaan ayaa la filayaa inuu xagaagaan ka tago hogaamiyeyaasha horyaalka France kuwaasoo bedelkiisa u arka xiddiga qadka dhexe ee kooxda Anderlecht Youri Tielemans.
Kooxaha Manchester United, Manchester City, Bayern Munich iyo Juventus ayaa sidoo kale dhammaantood isha ku haya saxiixa Bakayoko waxayna si dhow ula socdeen horumarkiisa xilli ciyaareedkaan, inkastoo sidoo kale ay janjeersanayaan dhanka Tielemans.
Si kastaba ha ahaatee, Daily Mail on Sunday ayaa maanta qoreysa inay Chelsea hogaamineyso uguna cadcadahay saxiixa Bakayoko maadaama tababare Antonio Conte uu doonayo inuu xiddigaan boos joogto ah kusoo jiito isagoo ka garab ciyaarsiinaya N’Golo Kante iyo Nemanja Matic.
Chelsea ayaa la filayaa inay xagaagaan iska iibiso kubadsameeye Cesc Fabregas oo kusii jeeda AC Milan, halka Manchester United ay dooneyso Willian, waana sababta ay usoo xerogelineyso Bakayoko oo muddo dheer diiradda u saarnaa.